anderson - Synonyms of anderson | Antonyms of anderson | Definition of anderson | Example of anderson | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for anderson
Top 30 analogous words or synonyms for anderson
မြန်မာ့ နန်းစဉ်ရတနာများ ဒီကျောက်စစ်ပြားဟာ အရင်းမူလနေရာ ဘယ်နေရာကဆိုတာအတိအကျမသိနိုင်သေးပါ။ အရှေ့ဘင်္ဂလား ကလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒေါက်တာ ဂျေ. အန်ဒါစင် (Dr J. Anderson) ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စု ဆောင်းမှုတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပြီး သူ့ဇနီးသည် Mrs G.S. Anderson အတွက်ထားရစ်ခဲ့တာပါ။ ဒေါက်တာ ဂျေ. အန်ဒါစင်ဟာ ၁၈၉၆ ခုနှစ်၊ဗြိတိသျှ အစိုးရရဲ့ ပထမဆုံး လေ့လာရေးခရီးစဉ်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်း ကိုဖြတ်ပြီး တရုတ်ပြည် ယူနန်ဘက် လေ့လာရေး ခရီးသွားအဖွဲ့ဝင်တွေထဲက တစ်ဦးပါ။
ဂျော့ချ် ဆိုးရော့စ် လုပ်ငန်း၏နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆိုးရော့စ်၏ သားကြီးနှစ်ယောက်နှင့် လုပ်ငန်း၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အရာရှိချုပ် Keith Anderson တို့ကစီမံကြီးကြပ်သည်။ လုပ်ငန်းအတွင်းရှိ ပစ္စည်းများ၏ ခန့်မှန်းခြေတန်ဖိုးမှာ ဒေါ်လာ၂၇ သန်းရှိသည်။
လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းများ ဖန်တီးတည်ဆောက်မှုဝါဒီ၏ တတိယမြောက်ရှင်းလင်းချက်အစုမှ လူမှုရေးအရ တည်ဆောက်ထားသော လူမျိုးအုပ်စု တို့ သဘာဝ၏ အရေးပါပုံကို Benedict Anderson (ဘန်းနီဒစ် အန်ဒါဆင်) ၏ စိတ်ကူးထားသော လူမှုဝန်းကျင် သဘောတရားအား ဆွဲထုတ်ခြင်းဖြင့် အလေးထားပြခဲ့သည်။ ယင်းရှင်းလင်းချက်အား ထောက်ခံသူတို့မှ Rwanda (ရဝမ်ဒါ) အား ၁၉၃၀ နှစ်များက ကျွဲနွားပိုင်ဆိုင်မှု၊ သွင်ပြင်တိုင်းတာမှုများ နှင့် ဘုရားကျောင်းမှတ်တမ်းများ ပေါ်တွင် အခြေခံသည့် ဘယ်လ်ဂျီယံကိုလိုနီအင်အား ကြောင့် Tutsi (တက်စီ) /Hutu (ဟူတူ) ကွဲပြားခြင်း အဖြစ်ကတည်းက ဥပမာတစ်ခုအဖြစ် ထောက်ပြခဲ့သည်။ ထိုအပေါ်တွင် အခြေခံ၍ မှတ်ပုံတင်ကတ်များ ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ယင်းမှတ်တမ်းများ သည် ၁၉၉၄ မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်ခြင်း တွင် အဓိက အခန်းကဏ္ဍတစ်ခု အဖြစ်ပါဝင်သည်။
လူမျိုးစု အချို့သော ဖြစ်ရပ်များတွင် အထူးသဖြင့် နိုင်ငံများဖြတ်သန်း၍ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ကိုလိုနီချဲ့ထွင်ခြင်း တို့တွင် လူမျိုးဝိသေသသည် နိုင်ငံသားနှင့် ဆက်နွယ်နေသည်။ မနုဿဗေဒပညာရှင်များ နှင့် သမိုင်းပညာရှင်တို့သည် Ernest Gellner (အားနက်(စ်) ဂယ်(လ်)နာ)နှင့် Benedict Anderson (ဘန်းနဒစ်(တ်)အန်ဒါဆန်)တို့ အဆိုပြုထား သော လူမျိုးဝိသေသ၏ ခေတ်အမှီဆုံးသောအသိအမြင်အတိုင်း လိုက်လာခဲ့ရာ ဆယ့်ခုနစ်ရာစုတွင် ခေတ်မီသော နိုင်ငံတော်စနစ် တိုးပွားလာသည်နှင့်အတူ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသော နိုင်ငံများ နှင့် နိုင်ငံချစ်စိတ်ဓါတ် တို့ကို တွေ့ရပါ သည်။ နိုင်ငံများ၏ယူဆထားသော နယ်နိမိတ်များ နှင့် ပြည်နယ်နယ်နိမိတ်များ တစ်ထပ်တည်းကျသည့် (သို့မဟုတ် စံပြတစ်ထပ်တည်းကျသည့်) "အမျိုးသား-နိုင်ငံများ" ပေါ်ထွန်းလာသည်တွင် ထိုသူတို့သည် အရေအတွက်တိုးပွားစေခဲ့ သည်။
ကျူးဘားဒုံးပျံအရေးအခင်း On the morning of October 27,aU-2F (the third CIA U-2A, modified for air-to-air refueling) piloted by USAF Major Rudolf Anderson, departed its forward operating location at McCoy AFB, Florida. At approximately 12:00 pm EDT, the aircraft was struck byaS-75 Dvina (NATO designation "SA-2 Guideline") SAM missile launched from Cuba. The aircraft was shot down and Anderson was killed. The stress in negotiations between the USSR and the US intensified, and only much later was it learned that the decision to fire the missile was made locally by an undetermined Soviet commander acting on his own authority. Later that day, at about 3:41 pm EDT, several US Navy RF-8A Crusader aircraft on low-level photoreconnaissance missions were fired upon, and one was hit bya37 mm shell but managed to return to base.
Britpop Britpo ၏ မူလအစသည် ၁၉၉၀အစောပိုင်းတွင် indie ဖြစ်ရပ်တွင် တည်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် London Camden Town မှ တီးဝိုင်းအုပ်စုများပါဝင်သည်။ Melody Marker rock ဂီတသတင်းစာမှ “The Scene That Celebrates Itself” တွင် ပါဝင်သည်။ဤဖြစ်ရပ်မှ အဖွဲ့အဝင်အချို့( Blur, Lush, Suede)သည် Britpop ကိုဦးဆောင်၍ တီးကြသည်။ အမေရိကန်မှ grunge ဂီတချဲ့ထွင်ခြင်းကို လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့သည်။ သတင်းစာဆရာ John Harris က ၁၉၉၂နွေဦးတွင် Blur ၏ "Pop scene" နှင့် Suede ၏ "The Drowners" ဖြန့်ချီချိန်တွင် Britpop စတင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ Suede ၏ "self-titled" album သည် UK ၏ သမိုင်းကြောင်းတွင် အရောင်းရဆုံး album ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၉၃ ဧပြီ Select မဂ္ဂဇင်းတွင် Suede၏ ဦးဆောင် အဆိုတော် Brett Anderson ကို cover အဖြစ်နှင့် Yanks go home ဟူသော ဆောင်းပါးပါရှိသည်။ ထိုဆောင်းပါးတွင် Suede, The Auteurs, Denim, Saint Etienne နှင့် Pulp တို့ပါဝင်သည်။